स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन के-के कागजात चाहिन्छ, शुल्क कति लाग्छ ? – Online Kendra
स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन के-के कागजात चाहिन्छ, शुल्क कति लाग्छ ?
१० बैशाख २०७९, शनिबार २०:५० OnlineKendra
बैशाख १०,काठमाडौँ । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले आइतबार सोमबार सम्बन्धित पालिकाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराउन पहिले त सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित पालिकाका मतदातामध्येबाट एक जना प्रस्ताव र एक जना समर्थक आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराउन १५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिलाई भने मनोनयन दर्ता शुल्क ७५० रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ ।
कुनै दलबाट उम्मेदवारी दिन दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र चाहिनेछ । कुनै सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा जनप्रतिनिधि भएमा राजीनामा दिएको निस्सा आवश्यक पर्नेछ ।
वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन १००० रुपैयाँ शुल्कलाग्नेछ । वडा सदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ लाग्नेछ ।
उम्मेदवारी दिन के के चाहिन्छ हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले बनाएको सूची
Top Headline, मनोरन्जनशुल्क कति लाग्छ ?, स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन के के कागजात चाहिन्छ
‘सबै पालिकामा उम्मेदवारी दर्ताको लागि तयारी पूरा’ : निर्वाचन आयोग
मनमोहन अस्पतालमा आईभिएफ सेवा सुरु
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:०२ NewsRoom 0
जेठ १४, काठमाण्डौ । ‘कबड्डी’को चौंथो श्रृंखलाले नेपाली बक्सअफिसमा ओपनिङ कीर्तिमान कायम गरेको छ । मुलुकका...